Chainalysis - yinkampani owatshabalalisa ukungaziwa Bitcoin - Blockchain News
Chainalysis – yinkampani owatshabalalisa ukungaziwa Bitcoin
Kumazwe amaninzi aphuhlileyo, umsebenzi uphantsi indlela ukungenisa imithetho ngolawulo cryptocurrencies kunye uvimba. Ekuqulunqweni eyilwayo, badla ke ancediswa ziinkampani ukuba esweni kuthungelwano ukuqapha, enye edumileyo – Chainalysis. kuphela 2017 inkampani efunyenwe ngayo $ 700,000, nokubambisana kunye nee-arhente karhulumente kunye nomthetho nokunyanzeliswa.
Chainalysis yasungulwa 2014 yi Jano Moller, Jonathan Levin no Michael Gronager. Eyona kwicala IKHAMPANI esweni nezithintelo, iintengiselwano cryptocurrency yokulwa imali ngokungekho semthethweni kunye nobuqhophololo. Iinkampani enikeza iinkonzo ezifanayo zininzi, kodwa phantse onke amasebe US, kwakunye nemibutho yaseYurophu ezifana Europol, isicelo Chainalysis.
Kunyaka ophelileyo Chainalysis wafumana ngaphezulu kwe $ 700,000 evela US Department of Homeland Security (DHS), i US Internal Revenue Service (IRS) kunye US Immigration and Customs Control Service (ICE) ngomsebenzi wayo. Kwakhona ngonyaka ophelileyo, le nkampani aqhagamshelwa rhoqo yimibutho yabucala, njengoko kuboniswa iingxelo zekota ngokwalatha abafowunelwa abaninzi nezivumelwano ngokubambisana.
Kwaye enye abathengi rhoqo Chainalysis yaba US Federal Bureau of Investigation (FBI), nto leyo iye kwakhona ngokuphindaphindiweyo akhawunti yenkampani kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Ngenxa nokuhambisana Chainalysis, FBI ikwazile ukufumana iziphumo ezibalulekileyo ekuphandeni izenzo nxaxheba kwisiza yorhwebo engaziwa Silk Road, kwakunye ufunde malunga iinkcukacha imilinganiselo ye-exchange Mt Gox. Emveni kwakho konke, abasebenzi Chainalysis kulandelelwa ezingekho 650,000 bitcoins, leyo eyaba eyaziwa ngexesha zetyala kwi Congress.
Ukwengeza, Bulelani umsebenzi kwinkampani zokubeka iliso, ngasekupheleni November 2017, i US inkundla federal yayalela exchange Coinbase ukubonelela idatha eyimfihlo ku 14,000 abasebenzisi. Eso sigqibo senziwa ekukhanyeni kophando yi-US Internal Revenue Service (IRS), leyo kurhanelwa ukuba abasebenzisi exchange abafumana ingeniso evela kwintengiso cryptocurrency, kwiimeko ezininzi, ukuya kude ekuhlawuleni irhafu. ke, ngokutsho data IRS ukuze 2015, irhafu ingeniso evela kwimisebenzi kunye bitcoin lahlawulwa kuphela 802 abantu.
Impembelelo on uhlelo
website Le nkampani ithi Chainalysis okholelwa cryptocurrency neteknoloji ivalela, yaye injongo yenkampani kukunika imibutho izixhobo ukuthintela imisebenzi yobuqhetseba kwicandelo ezezimali, ngexa kuhlonitshwa ilungelo lokuba yimfihlo. kunjalo, inyaniso, Iinkonzo blockanalysis yenkampani ukuqhagamshela abantu ezithile imicimbi ethile kwi-network.
ke, Bulelani iinkonzo Chainalysis, i IRS, umzekelo, iqwalasela nezenzo abanini of bitcoins kunye nezinye cryptocurrencies esweni ukuhlawula irhafu. Kwaye oku kuthetha ukuba transactions cryptocurrencies, ezifana bitcoin, Awukwazi engamelanga ithathwe njenge engaziwa. kwakhona, Iinkampani ezisebenzisa iinkonzo Chainalysis kufumana iingxelo eneenkcukacha imicimbi engekenziwa kwi ibhloko, ezinokubakho abathengi kunye namaqabane.
Isibakala sokuba inkampani Chainalysis lizingenisela abathengi ngakumbi nangakumbi phakathi abameli karhulumente kunye nezakhiwo, Ukwacinga amalungu amaninzi oluntu crypto nikholwayo ikamva cryptocurrency ngaphandle yommiselo karhulumente kunye nelungelo wonke lithiwe pahaha. kunjalo, ngokutsho intloko-mali Hermitage Capital Bill Browder, ngenxa yokuba izenzo iinkampani ezifana Chainalysis, cryptocurrencies abangabodwa ndlela ziba enomtsalane kunye oluthembekileyo utyalela zimali.
Ukuthembeka sa ifumana $ 70M iminikelo Bitcoin ngexesha 2017
2017 kwaba extraord ...
Post Previous:Blockchain News 26 EyoMqungu 2018
Post Next:Blockchain News 27 EyoMqungu 2018